नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको नाफा ३५ % बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? | आर्थिक अभियान
नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको नाफा ३५ % बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?
वैशाख २८, काठमाडौं । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण बुधवार सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको खुद नाफा गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुनलामा चालू आवको सोही अवधिमा ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवमा रू.२४ करोड ९१ लाख नाफा कमाएको उक्त कम्पनीले चालू आवको सोही अवधिमा रू. ३३ करोड ६८ लाख नाफा कमाएको छ ।
चालू आवमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानीमा वृद्धि भएको र सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा कम रकम छुट्याएकाले सञ्चालन नाफा बढ्न गई नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो ।
कम्पनीले गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. २ करोड ८६ लाख छुट्याएकोमा चालू आवमा रू. २९ लाख ७० हजार छुट्याएको छ। कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ५८ करोड ६६ लाख रहेको छ । साथै कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा जगेडामा रू. ६८ करोड ४९ लाख सञ्चित गरेको छ ।
सो अवधिमा कम्पनीले रू. ६ अर्ब ३८ करोड सापटि लिएर,रू. ३ अर्ब ३४ लाख निक्षेप संकलन गरेर रू. १० अर्ब ८० करोडभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको छ।
चालू आवमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू.७७ दशमलव शून्य ४(वार्षिक) मूल्य आम्दानी अनुपात २७ दशमलव ५८गुणा,तरलता अनुपात ३ दशमलव ५० प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २१६ दशमलव ७५ रहेको छ ।